Onye na-eweta ngwaahịa zuru oke na-eweta ego dị iche iche Zes bara nnukwu uru
ZH bara nnukwu uru - turquoise na-enye ndị na-enye ihe na-ebugharị na ụlọ ọrụ ọla
0 Na-agbakọ agbagọ
1 Raw Turquosisi ike
2-1 Turquoise Round Bounds
2-4 Turquoise boads
2-5 turquoise brick / square
2-6 turquoise Heishi bearings
2-8 turquoise bearing beads
2-9 turquoise pips beads
2-10 turquoise gburugburu / donut beads
2-11 turquoise beads
2-12 Turquoise Badrop beads
2-13 Turquose Cross Beeds
2-14 turquo tube beads
2-15 turquoise kwalerezet
2-17 Turquoise Eguru
2-18 turquoise osikapa
2-20 Turquointow Beads
2-21 Turquose Igha
2-22 Turquoise St Sufs Boots
2-23 Turquoite Buddha
2-24 Turquose Bults Bults
2-25 Turquoise Ering Beads
2-26 Turquoise Dands
3 Turquoise Cabozon
3-1 Turquoise Rour Round Rouchon
3-2 Turquoise Sebochon
3-3 turquoise Peardochon
3-4 Turquoise Marquise / Navate Cabachon
3-5 Turquoise Square Cushion Stonechon
3-6 Turquoise Netton Cushion Cabanon
3-7 Turquoise trapezoid Capezon
3-8 Turquoise Requiola RABOCHON
Turquoise Oditen Cabalen
Turquoise Ero na Cabochon
Turquoise obi Cabochon
5 Turquoise Feery
Turquoise bangle / mgbaaka
Turquoise ndị ọzọ
6 ihe ike gemstone
9 gemsstone & ornamental
10 gemstone olu
11 Gemstone Bang
12 Mgbaaka Galettone
13 Gemstone Entring
14 Gemscone Pendant
15 Gemstone mgbanaka
16 Gemstone setịpụrụ ọla
17 gemstone ndị ọzọ
18 ọla ọcha / ọla edo / ọla edo
Turquoise m foto
Ụlọ ọrụ na ire ere
Turquoio m Vedio
Nrụpụta nke usoro vidiyo usoro
Usoro ọgwụgwọ nke emepụtara Vedio
Kedu ihe kpatara ịzụta anyị
Ọnụ ọgụgụ nke ngwaahịa adịchaghị
Ha niile emepụtara ha dịka ụkpụrụ mba ụwa kachasị ike. Ngwaahịa anyị enwetala ihu ọma site na ahịa ụlọ ma ndị ọzọ.
Ha na-ewepụ ugbu a na mba 200.
Mkpụrụ osisi ZH bara uru bụ onye na-ebute na-ebute anụ ọhịa turquoise Raw na ọla na Gemstone na China ruo ihe karịrị afọ 15.
Pụrụ iche na Turquoise M na Turquoise Raw nkume, turquoise na ụdị ọla, ọla ntị, na-akụ, na-agbaze na ọla ịchọ ọla ọzọ.
Otu esi emeputa ihe
Kacha mma& Ejiji Gemstone Microneractiction
Nchikota nke nka ọdịnala& ihe ngosi ihe ohuru
Gbado anya na aka eji eme ihe& Ezigbo Mmalite
Jiri nlezianya nyochaa ya na ogo ahụ, ọgwụgwọ, bee, imewe, imepụta inlay na nnwale dị mma& mwegara
Ihe niile dị na gooquoise na ọla ga-elone nwere ike gafere GILL. Kindsdị dị iche iche nke tere turquoise na-ewu ewu na ahịa mba ụwa; Anyị na-enyekwa ndị na-eme mkpọtụ.
Mkpụrụ osisi ZH bara ụba bụ ihe na-eduga na-ebutu ihe eji emepụta ihe na China kemgbe afọ 2010, turquoise ọla ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ Gemstoise.
Turquoise na ụdị nke Gemstone dị iche iche, Cabonons, nke ejiri ọla ọcha ọla ọcha, 14k / 24k gemstone na-eme ka ọ bụrụ ọnụ ahịa ụwa.
Obere fluorite minimalite minemy Tower torlọ elu dị nkọ 20 inch nha site na 6-13mm
100% eke dị iche iche maka ọla
Olu olu dị iche iche dị iche iche dị egwu dị iche iche ọkụ
Oysters oyster na sponote goony shylone size site na 5-12mm ogologo 16inch
Oke ihe eji eme ihe eji eme ihe eji eme ihe di iche iche
Enyemaka Turquoise Bracet onyinye onyinye mgbaaka na obere mgbaaka na-agwọ ọla
Oyslo elu sitere n'okike, ogologo 16inch, nha 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 10mm
Anyị na-enye ọdịdị pụrụ iche iji mee ka ihe dị mma kee ihe ọchị ma na-akpali agụụ maka ndị na-ese ihe nkiri. Anyị na-ahụ maka ahịa na-achọ ma mee ka nzaghachi ọsọ ọsọ, na-elekwasị anya na inye ngwaahịa ndị dị ọnụ ala na ọrụ ndị ahịa dị elu.
Kwenye usoro ihe siri ike, ogo, nha, udi, nnabata, ụdị, ọrụ, nhazi oge, usoro nnyefe. Ọtụtụ n'ime ha na-arụpụta ihe iji lụso ndị na-eme ihe
Ime ka imewe ị na-adọta cad ma ọ bụ ihe mored iji gosipụta otu esi eme ozi ahụ.
Soro anyị na-akwado na ozi ziri ezi imeghe ihe nlereanya ma ọ bụ mee nkedo ahụ.
Mee ka ọkọlọtọ QA gosipụtara iji gosipụta ngwongwo dị mma, anyị ga-eme kaadị atọ dị mma, nke bụ maka ndị ọrụ otu QC anyị; Otu bụ maka ndị ahịa QC ndị ahịa, nke atọ bụ maka ngalaba nrụpụta anyị.
Soro gosipụta ọkọlọtọ QA iji mepụta ngwongwo buru ibu.
Site na Turquoise hụrụ onye ọzọ n'anya.
Anyị na-akwanyere onwe anyị nso n'ịhọrọ nkume dị ịtụnanya maka ndị kere eke iji nwee obi ụtọ.
E hiwela teknụzụ Shenzhen Hong Zeng Rong Zheng Rong ruo ihe karịrị afọ iri na ise. Companylọ ọrụ ahụ na-emekwa ka ọganihu na-aga n'ihu. O nwere ụlọ ọrụ nke ya ma mepụta ụdị nke ya. Anyị na-elekwasị anya na ezi omume na ezigbo turquoise ọla. Mkpụrụ osisi ZH bụ ezigbo onye na-eweta Gemstone, na-enye turquoise siri ike na turquoise beads, turquoise ọla. Ọ bụrụ na ị na-achọ turquoise ịchọ mma na-emepụta ihe na-emepụta ihe ma ọ bụ turquoise ndị na-eweta ihe, kpọtụrụ anyị.
Ngwaahịa ụlọ ọrụ anyị niile (turquoise na gemstone ọla) ga-anwale. Maka ngwaahịa anyị, ị nwere ike iji obi ike jisie ike. Bookslọ ọrụ ụlọ ọrụ anyị na-ewu ewu na mba ụwa. Anyị na-enyekwa nsogbu turquone.
Mgbe ọ sụsịrị ụzọ na ịsụ ụzọ si dị afọ iri na ise, a na-akazikwa ahịa ahịa na aha ọma na aha ọma nke aha ZHGems nke ukwuu, na elu-ọma usoro ọrụ na-ere ahịa na-aga n'ihu na-aga n'ihu na-akwụ ụgwọ ndị ahịa na-ere ahịa. E gosipụtara echiche nke ọla ịchọ ọla omenala na ọhụụ nke ndị ahịa. Na ọnọdụ dị na ahịa ...
Shenzhen Hong Zheng Teknụzụ Mkpesa"jikota oru ahia na ikwalite uwa uwa, ma gbalịsie ike'Schoollọ ọrụ na ụlọ ọrụ mbụ", ya na"Unilatization nke nhazi, arụmọrụ nke ọma, ọnụ ahịa a nụchara, na mmepe ndị otu.""Mmekọrịta ndị ahịa iji nweta mmeri mmeri ogologo oge" Dị ka azụmahịa njikwa ego, dabere na ụkpụrụ ịha nhata na uru dị iche iche, yana ngwaahịa dị oke mkpa, ma na-agba mbọ izute ndị ahịa, raara nye ya Ndị enyi ọ bụla na-enye ọkụ.
Onye ahia mbu bu na ihe nile bu ndi ahia, maka uru ndi ahia, iji nye ndi ahia nke nwere ndi ahia na ezigbo oru, nke mere na ndi ahia kwesiri ekwesi aha ha.
Jiri mpempe kọntaktị anyị na ibe kọntaktị anyị ma ọ bụ kpọọ anyị ka anyị tụlekwuo ngwaahịa a ọzọ.
Ngwaahịa ụlọ ọrụ anyị niile (turquoise na gemstone ọla) ga-anwale. Maka ngwaahịa anyị
Fluorite maka ime ụlọ
Akpụkpọ anụ ọhịa Black Agate Slab Beads Raw onyx Gemstone Ogologo mpempe bead maka olu olu pendant 10mm*45mm*5mm
Shenzhen Hongzheng Teknụ, Ltdhen, China na June 2010. Ngosipụta okike "Ghgems" ZHGGEMS "Goy na-emepụta na mmepụta nke 10% anụ dị ọcha, Yeze dị ọcha.
Ekwentị: +86 13751114848
Adreesị ụlọ ọrụ: Guangjundtou, Qinxi district, obodo Dongguan, China.
Hụ ihe ijuanya, biko kpọtụrụ ndị ahịa anyị.